Gott: Drei Götter? | Weltweite Kirche Gottes Schweiz | Weltweite Kirche Gottes Schweiz - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
ဆောင်းပါး > ဘုရားသခင် > ဘုရားသခင့: သုံးခုတပါးသောဘုရား?
သုံးပါးတစ်ဆူအယူဝါဒ [သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏အယူဝါဒ] သည် "ပုဂ္ဂိုလ်များ" ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုသောအခါတွင် ဘုရားသုံးပါးတည်ရှိသည်ဟု အချို့က လွဲမှားစွာယူဆကြသည်။ ဤသို့ဆိုကြသည်– ခမည်းတော်ဘုရားသည် အမှန်တကယ် “လူ” ဖြစ်လျှင် သူသည် မိမိ၌ရှိသော ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ (ဘုရားသခင့် အရည်အချင်းများ ရှိသောကြောင့်)။ “ဘုရား” လို့ မှတ်ယူကြလိမ့်မယ်။ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းလည်း အလားတူပြောနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသုံးဆူဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။
ဤသည်မှာ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ တွေးခေါ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အများအားဖြင့် မှားယွင်းသော အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်၊ သုံးပါးတစ်ဆူအယူဝါဒသည် ခမည်းတော်၊ သားတော် သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အသီးသီးတို့သည် မိမိတို့၌ ဘုရားသခင်၏အနှစ်သာရကို အပြည့်အ၀ ဖြည့်စွမ်းပေးသည်ဟု အတိအကျ အကြံပြုထားမည်မဟုတ်ပေ။ သုံးပါးတစ်ဆူဘာသာကို ကျွန်ုပ်တို့ မရောထွေးသင့်ပါ။ ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်သော သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူက ပြောသောအရာမှာ ဘုရားသခင်သည် သဘာဝအရ တစ်သားတည်းဖြစ်သည်၊ သို့သော် ထိုသဘောသဘာဝ၏ အတွင်းပိုင်းခြားနားချက်သုံးမျိုးရှိသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးပညာရှင် Emery Bancroft က ၎င်းကို Christian Theology၊ စ. 87-88 တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
"ဖခင် ဘုရားသခင်ကဲ့သို့၎င်း၊ ဘုရားသခင်သည်ခမည်းတော်မဟုတ်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဖခင်ဟူသောဝေါဟာရသည်ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝနှင့်ဘုရားသခင်အားသားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
သားအ ဘုရားသခင်ကဲ့သို့၎င်း၊ ဘုရားသခင်သည်သားတော်မဟုတ်၊ ခမည်းတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တည်း။ သားတော်သည်ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝ၌ဤကွဲပြားခြားနားမှုကိုအမှတ်အသားပြုထားသည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်ခမည်းတော်နှင့် ဆက်စပ်၍ လောကကိုရွေးနုတ်ရန်ခမည်းတော်ကစေလွှတ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခမည်းတော်နှင့်အတူစေလွှတ်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်ကဲ့သို့၎င်း၊ ဘုရားသခင်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သာမက၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝကိုခွဲခြားသိမြင်စေပြီးဘုရားသခင်သည်ခမည်းတော်နှင့်သားတော်တို့နှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိသည်။ ဆိုးညစ်သောသူများအားအသစ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအားသန့်ရှင်းစေခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုစေလွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ "
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဘုရားသခင်” ဟူသောစကားလုံးကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုနားလည်ရန်လိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်ဘုရားသခင်၏တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခြင်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်အားခြားနားခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Bancroft ပုံသေနည်းသည်အသုံးဝင်သည်။ တိတိကျကျပြောရလျှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဘုရား၏ခမည်းတော်ဘုရား၊ သားတော်ဘုရား၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါမည်သူမည်ဝါမှန်းဆချက်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းမပြုသင့်ပါ။
"ကန့်သတ်ချက်များ" နှင့် ဆက်စပ်ပုံများကို အသုံးပြုပါ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ သဘောသဘာဝကို ရှင်းပြရန် ကြိုးစားခြင်းသည် အမှန်ပင်တရားဝင်ပါသည်။ ဤပြဿနာကို ခရစ်ယာန်ပညာရှင်များက ကောင်းစွာနားလည်သည်။ သူ၏ဆောင်းပါး၊ The Point of Trinitarian Theology၊ 1988 Toronto Journal of Theology၊ Toronto School of Theology မှ ပါမောက္ခ Roger Haight က ဤကန့်သတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးထားသည်။ သူသည် သုံးပါးတစ်ဆူဓမ္မပညာရှိ ပြဿနာအချို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံသော်လည်း သုံးပါးတစ်ဆူသည် ဘုရားသခင်၏ သဘောသဘာဝကို မည်ကဲ့သို့ ခိုင်ခံ့စေကြောင်း ရှင်းပြသည် - ထိုသဘာဝကို လူသားတို့ နားလည်နိုင်သရွေ့ ကျွန်ုပ်တို့ ကန့်သတ်ထားသည်။
အလွန်လေးစားစရာကောင်းသော ဓမ္မပညာရှင်နှင့် ဓမ္မပညာပါမောက္ခ Millard Erickson ကလည်း ဤကန့်သတ်ချက်ကို ဝန်ခံပါသည်။ God in Three Persons စာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ ၂၅၈ တွင် သူသည် အခြားပညာရှင်တစ်ဦး၏ “အဝိဇ္ဇာ” ဟူသော ဝန်ခံချက်အား ကိုးကားဖော်ပြသည်-
“ [စတီဖင်] ဒေးဗစ်စ်က [သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ] ၏ခေတ်ပြိုင်ရှင်းလင်းချက်တွေကိုရှာဖွေလေ့လာခဲ့ပြီးသူတို့ရရှိထားတာကိုမအောင်မြင်ခဲ့တာကိုသူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတာကို ၀ န်ခံပါတယ်။ ။ သူသည်သူနှင့် ပို၍ ရိုးသားမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖိအားပေးခံရသောအခါဘုရားသခင်သည်မည်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း၊ သူသည်မည်သည့်နည်း (၃) နည်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်မသိကြောင်းဝန်ခံရန်ရှိသည်။ "
ဘုရားသခင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ် ဦး နှင့်သုံးဖြစ်နိုင်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်နားလည်ပါသလော။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ သူသည်ဘုရားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်သောသိသာထင်ရှားသည့်အသိပညာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကန့်သတ်ထားရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားလည်းပါ ၀ င်သည်။ ဘုရားသခင်ထံမှ hypostases အစား“ person” ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပေးအယူတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့၏ဘုရားသခင့်ကိုယ်ပိုင်သဘောသဘာဝကိုအလေးပေးဖော်ပြသည့်စကားလုံးတစ်လုံးလိုအပ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် "လူ" ဟူသောစကားလုံးသည်လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါခွဲထုတ်ခြင်းသဘောလည်းပါဝင်သည်။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒများကဘုရားသခင်သည်လူမျိုးစုံနှင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော်“ မြင့်မြတ်သောကြင်နာတတ်သောသူ” ကားအဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ပုဂ္ဂိုလ်” ဟူသောဝေါဟာရကိုဘုရားသခင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိတိုင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစကားလုံးဖြစ်ပြီး၊
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒကိုငြင်းပယ်ပါကသူသည်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းတည်ရှိမှုကိုထိန်းသိမ်းသောရှင်းလင်းချက်မရှိပါ။ ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်တွေကဒီအယူဝါဒကိုပုံဖော်ခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ဟာတစ်ပါးတည်းသောအမှန်တရားကိုသူတို့လက်ခံခဲ့တယ်။ သို့သော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဘုရားသခင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျမ်းစာ၌လည်းဖော်ပြထားကြောင်းသူတို့ရှင်းပြလိုကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်အတူ။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒသည်ဘုရားသခင်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်မည်သို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကောင်းဆုံးလူ့စကားများနှင့်အတွေးအခေါ်များကခွင့်ပြုသကဲ့သို့တိကျစွာတီထွင်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝကိုအခြားရှင်းလင်းချက်များသည်ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ Arianism ဖြစ်သည်။ ဤသီအိုရီကသားတော်သည်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖန်ဆင်းခြင်းခံထားရသည်ဟုဆိုထားသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ Arius ၏နိဂုံးသည်အခြေခံအားဖြင့်မှားယွင်းခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာသားတော်သည်ဖန်ဆင်းခံသတ္တ ၀ ါမဟုတ်၊ ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝကိုသားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေါ်ထွန်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝကိုရှင်းပြရန်တင်ဆက်ထားသည့်သီအိုရီများအားလုံးသည်မှားယွင်းစွာသာမကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒသည်ဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝကိုကြေငြာသည့်အနေနှင့်သမ္မာကျမ်းစာသက်သေများ၏အမှန်တရားကိုထိန်းသိမ်းထားသည်မှာရာစုနှစ်များစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။